SIDEE LOO DOORIN KARAA CAADOOYINKA XUN?! .
MAQAALKII: C/LAAHI KUTUB
Waxaan shakki ku jirin qof kasto oo ibni aadam ah inuu leeyahay dhowr dhaqan oo uu aaminsanyahay ineysan aheyn kuwo suuban.
Sideedaba ibni aadamkana eebe wuxuu ku abuuray rabitaanka isbadalka si uu ula jaanqaado bulshada ku xeeran.
Sidaas darteed ceeb ma aha inay jiraan dhowr arimood oo aad is leedahay alleylahay waa inaad badashaa waayo wax adiga kaligaa kugu kooban ma aha ee dadka dhan ayaa kula wadaago.
Markastoo ruuxa uu la kulmo cawaaqib xumo ay u horseedeen caadoyinkaas wuxuu waqti badan galiyaa inuu ka fakaro sidii uu u doorin lahaa.
Maqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonnaa caadoyinkaas sidii looga talaabi lahaa loona daaweyn lahaa iyo dhowr talo oo na wada anfaci doonto haduu alle yiraah.
Hadaba Intaas aan uga gudubno gogoldhiga qormada oo aan u tallaabsano dulucdeeda.
Si aad u dooriso dhaqan aan wanaagsaneyn waxaa lagama maarmaan ah inaad ku dhaqaaqdo talaabooyinkaan hoos ku xusan:-
Dib u milicso cajaladda noloshaada.
Waxaad dib u eegtaa noloshaada tan iyo intii aad garaadka laheyd waxaadna isku daydaa inaad si feejigan ugu fiirsato qaab nololeedkaadii, halkaas waxaa kaaga soo baxaya caado walba oo kuu horseeday habsaan ama qal qal galisay shaqadaada, xiriirka ahalkaada iyo asxaabtaada aad wadaagtaan, caafimaadkaada iyo waliba Eebe- subxaanahu wa tacaalaa-xiriirka aad la leedahay.
Kadibna meel intaad ku xardhatid caadooyinkaas iila soo gudub tallaabada xigta oo ah.
Wacad ku mar inaad dabar goyso caadooyinkaas
Markii aad ogaato caadooyinkaas, naftaada balan iyo axdi kula qaado inaad joojiso dhaqamadaas waliba sida ugu dhaqsiyaha badan.
Hadii aadan talaabadaan horey ka fulin, mustaqbalkana ma fulin doontid.
Nafta iyo sheydaanka waxa ay kuugu sheekeynayaan oo ah inaad dib u dhigato talaabadaan ama waqtiga uu munaasab aheyn ama dhaqankaan aadan badali karin waayo mudo dheer ayaad soo wadday iyo wixii la mid ah dhag jalaq ha u siin hana u joojin oo howl aad qaban karto maanta beri ha u dib dhigan.
Tusaale ahaan, hadii uu saaxiibkaa khilaaf idinka dhexeeyo, telifoonka qabo, numberkiisa soo saar kadibna isla xaaladaas wac, oo la heshii.
Wax badan ka ogow oo baaritaan ku samey khatarta caadooyinka xun.
Waxaad isku taxalujisaa inaad baaritaan dheer ku sameyso, wax badanna ka ogaato dhibaatooyinka iyo sahmeynta ay leeyihiin caadooyinka aan suubaneyn ee aad leedahay.
Waxaad aqrisaa cilmi baarisyada laga sameeyay, buugaagta laga qoray iyo maqaalada laga baafiyay caadooyinkaas taas waxay kaa saacideysaa in aad sii adkeyso go�aankaadii ahaa inaad joojiso caadooyinkaas.
Tusaale:- baaritaanka khatarta sigaarka uu u leeyahay caafimaadka waxay kugu kaalmeyneysaa joojinta cabitaaankiisa, sidoo kale cuquubadda taariku salaadka iyo dambigiisa inta uu baaxad dhanyahay hadii aad garwaaqsato alle ayaad u soo laabaneysaa oo waad toobad keeneysaa-idam alle-.
Si xikmadeysan u billow dhaqan gelinta go�aankaada
Caado aad ku soo bar baartay ama in mudo ah ku soo dhaqmi jirtay si fudud inaad u dooriso way adagtahay.
Aqoonyahannada arimaahaan ka faallooda waxay sheegaan dadka isbadalka buuxa sida deg degta ah ku sameeyo inay sahlantahay in ay ku soo laabtaan caadooyinkii horey ay u joojiyeen.
Sidaas darteed waxaa aad muhiim u ah inaad ku afbillowdo dhaqan gelinta go�aankaada tallaabooyin miisaaman oo xikmadeysan adigoo ku xisaabtamaya hadba tamarta iyo awooda aad u leedahay la qabsiga xaaladda cusub.
Guntiga u xiro ka mira dhalinta rabitaankaada iyo ujeedadaada.
Nin la oran jiray Alexis Carrel oo dhalashadiisu aheyd faransiis ayaa wuxu yiri:
� Qofka isbadal ma sameyn karo, gocasho iyo xanuun la�aan�.
Caadadaadii hore inaad iska deyso tan cusubna dhaqan galiso way dhib badantahay muddo yar markii aad joogtabada tii hore ayaa isi soo bandhigeyso , tusaale ahaan markii aad joojiso cabidda sigaarka muddo kadib waxad arkeysaa adigoo ku sheekeysanaya ayaantaan sigaar afka ma aadan saarine bal hal xabo shido. Marka isku day inaad tunka u dhigato rabitaanada noocaas ah oo aad ka biyo diido si aad uga run sheegto rabitaankaadii iyo ujeedadaadiiba .
Ugu dambeyn:- hadii aad talaabooyinkaas si miisaaman u fuliso ilaahayna talada saarato waad ku guuleysaneysaa inaad ka takhalusto caadoyinka aan wanaaganeyn waliba si fudud ilaah idamkiis.
Baaritaan ku samey nafsadaada iskuna day inaad kala barato meelaha aad ku liidato iyo kuwa aad ku fiicantahay , kadibna sii adkey dhanka aad ku wanaagsantahay kan aad ku liidatana u howl gal sidii aad u kobcin laheyd.
Hadii aadan is badal sameynin aqoontaada iyo garaadkaadana sare u qaadin, horumar iyo horay u talaabsasho inaad sameyso waxay la mid tahay calaacasha oo tin ka soo baxdo oo kale, qofkii aan maskaxdiisa iyo habka uu u fakaro aan badalinna wax uu badali karaahi ma jiraan.
Ugu dambeyn, Eebe wax walbo ayuu ku siiyay, caafimaad ayuu kugu maneystay, caqli taam ah iyo garaad ayuu kugu hibaystay, waxaad niyada ku heysidna waad heleysaa iska daa tashaa�umka wixii tagay way tageen waxaad tiigsataa mustaqbalka mar walbo kheyr iyo wanaag rajey, waxaad damacsantahay waad gaareysaa waxaadna ka mid noqoneysaa kuwa liibaana aduun iyo aakhiraba idam alle.
C/laahi Xasan C/qaadir Kutub
Tix raac:- Qormadan qeyb ka mid ah iyo kuwo la mid ah waxaad ka heli kartaa buuga la yiraahdo Control Your Self ee uu qoray Dr. ibrahim El-fiki.